Tababar Loo Qabtay Shaqaalaha Xarumaha Caafimaad Ee Deegaanka - Cakaara News
Tababar Loo Qabtay Shaqaalaha Xarumaha Caafimaad Ee Deegaanka
Jigjiga(Cakaaranews) Arbaco 5ta July 2017. Tababar loo qabtay shaqaalaha caafimaadka ee xarumaha caafimaadka deegaanka islamarkaana ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadilahaa adeega bixinta caafimaad ee health centerada deegaanka ayaa ka qabsoomay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta Iyo adeega shacabka DDSI.
Hadaba tababarkan oo ay kasoo qaybgaleen Wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil iyo maareeyaha wakaalada dabagalka dawooyinka iyo cuntada marwo Faisa Xasan Ibraahim ayaa waxaa furitaankiisii ka hadlay Wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil oo sheegay inuu tababarkan yahay mid kor uqaadaya garaadkiina xirfadeed islamarkaana waxbadan ka badali doona qaab shaqeedka xarumaha caafimaad ee deegaanka. Wuxuuna wasiirku intaa ku daray in mudada uu cashirku socdo la ilaaliyo saacada uu cashirku baxayo maadaama uu tababarku yahay mid muhiim ah. Islamarkaana bulshada loogu adeego si hagar la aan ah.
Dhanka kale waxaa iyana dhankooda ka hadlay qar kamid kasoo qaybgalayaasha tababarka oo sheegay inuu tababarkan yahay mid muhiim u ah islamarkaana waxbadan ka badali doono qaab shaqeedkooda ku aadan dhanka adeegbixinta xarumaha caafimaad ee deegaanka, Iyagoo intaa ku daray inay waxay ka faaiidaan tababarkan ugu adeegi doonaan bulshada deegaanka.